पारिश्रमिक बापतको रकमद्वारा पोखरा ३३ खेलकुद सामग्री बितरण गर्दै मन्त्री थापा ! « Pokhara Pati
पारिश्रमिक बापतको रकमद्वारा पोखरा ३३ खेलकुद सामग्री बितरण गर्दै मन्त्री थापा !
प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ५, शनिबार
मन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपश्चात पोखरा ३३ को विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको र हाल सोहि अनुरुपको काम भइरहेको बताए । उनले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हुनु सबैको जीत भएको दाबी गरे । सरकारी निवास समेत प्रयोग नगरी आफ्नै घरमा बसेका मन्त्री थापाले सरकारको खर्च कटौती गरी विकास निर्माणका कार्यमा आफु समर्पित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पोखरा २१ र ३३ नम्बर वडा दुर्गम वडा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा लक्षित हुने गरी आफ्ना कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रति जोड गरे । उनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन जुनसुकै समयमा पनि हुने भएकाले पूर्वतयारी अप्नाउन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । क्षमताअनुसारको जिम्मेबारी दिने गरी यसपालीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याए ।
संघीय सरकारमा अवसर पनि राम्रा भएकाले त्यहि अनुरुपको प्रचारप्रसारमा दौडिन मन्त्री थापाले अनुरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश केपी शर्मा ओलीको राम्रै पकड भएको क्षेत्र भए पनि त्यसलाई भत्काउन कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार सफल भएको तर्क उनको छ । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस पोखरा ३३ भरतपोखरीका सभापति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री थापालाई कांग्रेसको साख जोगिने गरी काम गर्न आग्रह गरे । मन्त्री थापाको विषयमा आफुले धेरै गुनगान सुनिरहेको र यसलाई यथावन राख्ने गरी कामबाट गति लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रति उनको जोड थियो । आगामी निर्वाचनमा कांगे्रसको जीत सुनिश्चित हुने गरी काममै ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली कांगे्रस पोखरा ३३ भरतपोखरीका पूर्वसभापति भोजराज आचार्यले अघिल्लो सरकारले नगरेका काम अहिलेको सरकारले गरेर देखाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन भएको धेरै समय भएको छैन । तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट देखिने गरी नै उल्लेखनीय काम भएका छन् । यसको मूल्यांकन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ पोखरा ३३ मा सरकार परिवर्तन भएपश्चात राम्रा परियोजनाहरुले गति लिइरहेको भनाई उनको थियो ।
कार्यक्रममा पूर्व जिल्ला सदस्य विष्णु पौडेल, महासमिति सदस्य केशव प्रसाद निर्दोशी र पोखरा ३३ भरतपोखरी तरुण दलका सभापति भूपेन्द्र थापाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नेपाली कांग्रेस पोखरा ३३ का सह—संयोजक दिनेश आचार्यले गरेका थिए । एभरेस्ट आवाजबाट